आमा बनिन् अभिनेत्री प्रियंका, के राखिन् छोरीको नाम ? – Khabar Patrika Np
आमा बनिन् अभिनेत्री प्रियंका, के राखिन् छोरीको नाम ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन ०६, २०७८ समय: १६:३७:२५
काठमाडौं । अभिनेत्री प्रियंका कार्की आमा बनेकी छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् अभिनेत्री प्रियंकाले आफू आमा बनेको जानकारी गराएकी हुन् । अभिनेत्री प्रियंकाले छोरीलाई जन्म दिएकी हुन् ।
उनले छोरी र श्रीमान आयुषमान देशराज जोशीसहितको दुई वटा तस्वीर सेयर गर्दै सुन्दर संसारमा छोरी ‘आयंका कार्की जोशी’लाई स्वागत छ, लेखेकी छन् । तस्वीर र प्रियंका र आयुषमान खुसी मुद्रामा देखिएका छन् । बि.सं. २०७६ साल फागुन १६ गते अभिनेत्री प्रियंका र आयुष्मान देशराज जोशीबीच विवाह भएको थियो ।
भागले जनाएको छ । अध्यागमनका अनुसार ४ दिनमै १० हजार नेपाली घर फर्केका छन् ।
नेपाल आउने यात्रुहरूका लागि अध्यागमन विभागले ७२ घण्टाभित्र गरेको पीसीआर रिपोर्ट र पूर्ण डोज खोप लगाएको प्रमाणपत्र अनिर्वाय गरेको छ । अन्यथा नेपाल आएर पनि सरासर घर जान पाउने छैनन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो व्यवस्था अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी जोकोही आगन्तुकले नेपाल प्रवेश गर्न ७२ घण्टा भित्रको पीसीआर रिर्पोट र पूर्ण डोजको खोप लगाएको प्रमाण ल्याउनुपर्ने ब्यवस्था छ ।
अन्यथा आगन्तुकले १० दिनसम्म होटल क्वारेन्टिन अनिवार्य बस्नुपर्ने छ । त्यसका लागि विमानस्थलमै हेल्थ डेक्स बनाइएको छ । जो नेपाल आउन चाहन्छ ः उसले ७२ घण्टाभित्र गरेको पीसीआर रिपोर्टका साथमा पूर्ण भ्याक्सिनेटको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । त्यसो नगरेकाहरुलाई विमानस्थलवाटै क्वारेन्टिनमा पठाउने ब्यवस्था पनि गरिएको छ ।